General zvemupiro Kushandisa Rikoooo.com
Last dzakachinja pamusoro 16 / 01 / 2017
Terms aya Use kutsanangura mamiriro pasi iyo Website Rikoooo.com anopa kwekuwana ayo. By kunyoresa pamwe Rikoooo.com, imi kusimbisa kubvuma zvose stipulations idzi General Conditions of Use. Kana usingabvumirani kune Terms izvi uye Conditions, murege kushandisa mabasa edu.
basa iri notifies imi pose faira itsva inowanikwa kukopa uye mashoko anokosha. Your kero e haisi kutapukira chero pati rechitatu uye anoramba zvachose zvakavanzika. Unogona chero nguva yokugadziridza uye kukanzura chipeto wenyu nhengo nharaunda kana nechepasi imwe neimwe Email akagamuchira.
Kushandisa Members Your Area
Kuwana kwenyu nhengo nharaunda, une identifier uye pasiwedhi kuti vakatsunga pachako pawakatanga akasvikopindamo. Kana kurasikirwa izvi Username uye pasiwedhi, unogona kukurumidza kuwana navo panzvimbo Rikoooo.com kuburikidza nekudzvanya pamusoro kubatana riri mapazi yokuzikanwa:
Uchabva akatuma email chine password.
Maererano nomutemo "Informatique bv Liberté" pamusoro 6 January 1978, une kodzero kuwana, yokugadziridza, gadzirisa uye kuidzima mashoko pamusoro penyu.
Kuita nhatu kodzero iyi mhinduro dzinowanikwa kwamuri.
- Log in wako "Member Area"Uye chero kuchinja paIndaneti.
- Vonai Webmaster
- Tumira atanga tsamba kuna Rikoooo.com 107 chemin gaillard Du chengarava 31410 Noé - France
Rikoooo.com inozviita kushandisa zvose zvinoreva zvakakodzera kuti tive nechokwadi yakanakisisa inobvira urongwa yemabasa rinopa kuti Internet user. Hazvigoni kuitwa akafanirwa iri chiitiko kwesimba majeure kana of facto mhiri kwayo kudzora, kunyanya mune chiitiko ane chidzivaidzo basa zvinobva kukundikana norunhare samambure kana internet access Provider Indaneti User kana MASHOKO EZVAKAITIKA kwenzvimbo zvinoriumba kana paWeb server.
Rikoooo.com haasi anokonzera kushandiswa kuti kuitwa kubudikidza achiputa mashoko uye rubatsiro panzvimbo.